प्रचण्डलाई कांग्रेसको प्रश्न- कमरेड यहाँको उचाई र उमेरले यस्तो बोल्नु शोभनीय हो ? « Postpati – News For All
प्रचण्डलाई कांग्रेसको प्रश्न- कमरेड यहाँको उचाई र उमेरले यस्तो बोल्नु शोभनीय हो ?
मंसिर ११, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कास्की -२ का आफ्ना उम्मेदवार खेमराज पौडेलविरूद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठाएको छ ।
प्रचण्डले बुधबार पोखरामा आयोजित चुनावी सभामा ‘देवघाटतिर जानुपर्ने मान्छेलाई कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएको’ भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
कांग्रेसले कास्की २ मा ७५ वर्षका खेमराज पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रचण्डको अभिव्यक्तिपछि कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रचण्डको उचाइ र उमेरले यस्तो बोल्नु शोभनीय नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
बुधबार दिउँसो ट्वीट गर्दै शर्माले भनेका छन्, ‘देवघाट पठाउने उमेरमा सांसद? प्रचण्डले आज पोखरामा भन्नू´भो l कमरेड यहाँको उचाई र उमेरले यस्तो बोल्नु शोभनीय हो ? ७० कटेका ट्रम्प अमेरिकाको रास्ट्रपति बन्न मिल्ने, ७० कै हाराहारीका केपी कमरेड प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने। अनि त्यस्तै उमेरमा खेमराज गुरुले सांसद बन्न चैं किन नमिल्ने ?’
#बिश्व प्रकाश शर्मा